Eminyakeni emihlanu TNT ababukele isiphetho Amaqhawe asiwona umdlalo wethelevishini ethandwa "univer. ehostela okusha "(Qhubeka" univer "uchungechunge intsha). Abalandeli bakhathazekile isiphetho izinhlamvu abawuthandayo, ngoba cishe sekube nemindeni yabo eminyakeni. Ukuze zonyaka elandelanayo abalandeli ababili ujabule Heroine entsha - indodakazi Umphathi Zuyev, ubuhle Varvara Pavlovna. Izibukeli wathandana Varya "Uni". Umlingisikazi (njengoba igama layo, ukufunda, njll) abalandeli ukuthanda.
Umlingisikazi ngokuthi uCatherine Molohovskaya.
Biography Catherine Molohovskoy
Catherine wazalwa ngo-October 28, 1985 edolobheni elincane Belarusian ka Polotsk.
Mayelana nomsebenzi actress Kate yena akazange acabange esafunda umculo esikoleni e upiyano, futhi abazali bami bagculiseka ukuthi lwaluyoba intatheli, ngokuba wayemenzele ephupha ke isikhathi eside, futhi efunda ibanga le-11, ngisho engekho wafunda e-Faculty of Journalism.
Inkundla Yemidlalo Yeshashalazi School Schepkinskoe actress ikusasa "Uni" (Varya) kwavela ngengozi ukuya eMoscow ngoba inkampani nomngane. Catherine wayengalindele ukungena, kodwa uhlolo emnyango ukuze ubonise zonke amakhono abo futhi wadlulisela Zama lokuqala, futhi ngamunye kuhlulekile. Ngemva kokuthweswa iziqu, wathola i-diploma futhi indawo inkampani ye eMoscow Drama Theatre yaqanjwa N. V Gogolya.
Yaseshashalazini, Catherine Molohovskaya ukudlalwa imikhiqizo enjalo: "Theatrical Inoveli" (Umfundi), "UCharley sika Anti" (uBetty), othi "The Last" (Luba), "zikamanqulwane emuva emhlabeni" (Leroy) kanye "U-Elsa Ugly" (Elsa) .
umsebenzi engiwuthandayo of uCatherine - indima Chaser emdlalweni "zikamanqulwane emuva emhlabathini." Lapho kowamanqamu play uhlamvu wayekhalela, ukukhala Igumbi naye, futhi kwaba nomuzwa omkhulu ukuqonda kwabo bobabili phakathi umculi kanye isibukeli.
Okwamanje yena udlala interactive yaseshashalazini iphrojekthi "Scissors." Lokhu ahlekisayo umphenyi indaba lapho izilaleli enquma isiphetho izinhlamvu.
Ezikrinini lale nkanyezi esizayo yochungechunge 'univer. ehostela okusha "(Varya), actress Catherine Molohovskaya uqala ukuvela eminyakeni 10 edlule, wadlala indima elincane imodeli movie Katie-umphenyi" Vaccine ". Njengomdlali waseshashalazini kwaba indima yokuqala ku-movie, lesi sigameko senzeka kuyajabulisa. Ngo indaba Heroine yayo wathela acid, ngakho kwakudingeka ukwazi ukudlala ngebhandeshi gauze ngobuso. Amehlo uhhafu ivaliwe, lutho kungabonwa, futhi ngenxa yalokho-ke kwakudingekile ukuya isethi! Catherine wayenovalo, kodwa abalingani endaweni usethe actress abasha isimo ukusebenza nokuchaza izigaba ebalulekile ukuqopha.
Okulandelayo kwakungamadodana izindima amaphrojekthi "junior", "Trap ngoba umbulali," "Umtfumbu ifa", "Baba, uMathewu," futhi kwadingeka izindima amafilimu esifushane, enye yazo - ". Castle Elves"
umsebenzi Catherine zakamuva - indima movie "Umpheki singenamuntu Life", eyakhululwa ngo-March walo nyaka.
Ngo arsenal of izindima Catherine eziningi, kodwa umbukeli is njengomdlali waseshashalazini eyaziwa, ukudlala Varya e "Uni" ( "ehostela okusha"), indodakazi li noMichael intombazane.
Heroine okusha yochungechunge 'univer. ehostela okusha "
"Univer. ehostela okusha "- phambili asiwona umdlalo wethelevishini ethandwa" univer ", ukudutshulwa eyaqala ngo-2011. Uchungechunge isitshela indaba ekuphileni kwansuku zonke abafundi lanamuhla, owafika ukunqoba Moscow kulo lonke elaseRussia, nobuhlobo bazo. Heroes anobungane futhi uthando, ukulwa futhi enze ukuthula, ngenkathi iya ku ezihlekisayo izimo. Ukuphila akusho yima, izinguquko ezinkulu ezenzekayo ohlelweni isiphetho abalingiswa abasemqoka abazizwa ngayo. amafayela Siqu uMichael, isifazane serial, kwashintsha kakhulu nge obhekwe Varvara Pavlovna.
Esikhathini uchungechunge "univer" Varia - indodakazi li sika. Umlingisikazi Catherine Molohovskaya wangitshela ukuthi yena wasithanda uhlamvu wakhe: kuba intombazane eqinile futhi beqiniseka ngubani lula ngokwanele ukusebenzisa ekuphileni. Ngokwe-simo, esehlale isikhathi esithile e-United States, Varya wabuyela ekhaya eMoscow, lapho wahlela wezengqondo eMoscow State University, lezi Umphathi okuyinto uyise - Pavel Zuev (Sergey Pioro). isiphelo sayo silindelwe uMikayeli, noma Arturom Mikaelyanom (Ararati Keschyan), umfundi wase-le nyuvesi kanye abasha umlando uthisha. Nazi nje nobaba esiqinile akuyona ukukhetha ujabule ngendodakazi yakhe, njengoba uMichael ke inezimangalo yayo, kodwa wathi kwaba uthisha ngempela ethembisa. Yini eyokwenzeka kuya umbhangqwana othandanayo? Lokhu kungabonakala ngokubheka ukuvakashela izingane ehostela entsha amanyuvesi edume kakhulu kuleli zwe.
On the isethi ochungechungeni 'univer. ehostela okusha "
Thanda abadlali abaningi, uCatherine, actress entsha "Uni" (Varya), wafika umbukiso, wedlula auditions. Ingabe umncintiswano sina? Lo mlingisi alisho lutho, kodwa siyazi ukuthi kwakhala ngokusebenzisa Adalberto isikhathi eside ngemva ekubunjweni, lapho eseneminyaka eholidini. Uyephuza ukusayinwa Kate akazange ungenwa, futhi ngokushesha ngemva kokuvunyelwa.
Catherine ukudlala asiwona umdlalo wethelevishini izimbangela sesabe, ngoba kuye kwaba uhlobo olusha, okuyinto kwadingeka sizivumelanise ukufunda amacebo ezazingaziwa, ngoba okukhethekile kuyinto actress okukhulu.
Nge nabalingisi yochungechunge Catherine esungulwe kobungane nobudlelwane. Kuyamjabulisa elifudumele isethi kanye nobuchwepheshe ngawo indlela iqembu.
Varya kuqala wazalwa uhlobo "uMichael isiketi", kodwa uCatherine Molohovskaya wadala uhlamvu atypical elikhanyayo kakhulu, ubuntu namandla futhi intombazane enhle ukuthi wakwazi ukunqoba inhliziyo umfana enjalo hot like Arthur Mikaelian.
Futhi manje, uma abantu ujike emgwaqeni bese uthi: "Lona umdlali waseshashalazini kusukela" Uni "Varya," Catherine uyibheka njengesibonakaliso ukuqashelwa.
Umsebenzi Play - ungakwazi ukuhlanganisa
Umsebenzi umdlali kunzima kakhulu, lidinga amandla ngokomzimba nangokokuziphatha. Ongeke wazi kanjani ukuthatha indawo ukusebenza ngosuku olulandelayo. Uma ucingo sokudubula ekuseni uma uthola shot ke akunankinga, kodwa uma kuphela usuku lonke ukuba alinde ngaso ukukhululwa yayo phezu isethi, ekupheleni kosuku uyakhathaza kakhulu. Catherine wafunda ukulala kunoma iyiphi isikhathi esikhululekile ukuze ubuthongo akuyona wone ukwakheka noma izinwele, futhi inkomishi yekhofi njalo kusiza ukuze bajabule, ngiqale sokudubula.
Kate othanda ukuba adle, izinyo enkulu elimnandi, phinda kilojoule ushaye ejimini.
Uma unikezwa ithuba uphumule ngezimpelasonto, angakwazi ithikithi ihora. Yena uthanda ukuhamba, iza ekhaya, uya ehlathini amakhowe kanye amajikijolo.
Lo mlingisi ayishintshi iphupho lakhe lokuba intatheli, futhi mhlawumbe esikhathini esizayo ukuze uqaphele imibono yabo.
Kwethenjwa ukuthi uCatherine Molohovskaya yisikhathi liyowanqoba izilaleli zinendima ethile ehlukile, hhayi kuphela njengomdlali waseshashalazini kusukela "Uni" Varia beyoba bajabule naye "serial" nezinye.
Inyama isobho: zokupheka ezithakazelisayo futhi amasu ukupheka